Mamwe mafirimu evhidhiyo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mamwe photo-video
serial number of adobe photoshop cc Akati, hey, ndinoda chaizvo kumusiya nokusingaperi
Nzira yekutarisa Exif kusvika mufananidzo
Maitiro ekuona Exif kune foto Showexif Kune akawanda mapurogiramu anogona kuziva kuita izvi, kana anoitirwa izvo. Kunze kwekunge, chokwadi, pikicha inotorwa kubva paInternet, panowanzove pasina exif. ...
Pamufananidzo upi wemufananidzo weafa anofanira kusungira ribhoni dema? Uye izvi zvinogona kujekeswa kupi?
Pane imwe kona yemufananidzo wemufi iyo tepi nhema inofanira kuturikwa? Uye izvi zvinogona kujekeswa kupi? zvisina kufanira pazasi kurudyi ... Tepi inowanzo kusungirirwa pazasi kurudyi kana pakona yepamusoro (zvine hukama nesu). Kunyange…
GP PowerBank Quick 3 chiratidzo chinopenya zvitsvuku kwemaminitsi maviri uye zvino chinopenya. Chii?
GP PowerBank Inokurumidza 3 charger iyo chiratidzo inovhenekera tsvuku kwemaminetsi maviri, uye ndokubwaira, chii chiri kunetsa? Zvichida mabhatiri haasisiri kushanda. Ndine ndangariro imwechete. Inoshanda zvakanaka.Chiratidzo chacho chakatsvuka ...
Nei kombiyuta isingaoni kamera yemagetsi?
Nei kombiyuta yangu isingaone kamera yangu yedhijitari? Ndiudze. Ini ndakaisa iyo digicam mulaptop kuburikidza neusb, yakawanikwa, asi inoti iro folda racho harina chinhu. Pamwe komputa haina kuona kamera, nekuti mu nm ...
nzira yekutarisa chinyorwa pamatambudziko
kutarisa sei pikicha yekuba Pachine mapikicha asina kubiridzira? Kana iwe ukatenga pikicha kubva kumunyori, haunyare kukumbira kuti uone kunobva. Makamera ane hunyanzvi anokwanisa kurekodha hunyorwa mukopi. ...
Nzira yei yekuona zvifananidzo kubva pane flash drive? on nubuck
maitiro ekuona mufananidzo kubva kune flash drive? pane nubuck Iwe unoiisa mukati meye memory slot uye tarisa At nubuck - hapana nzira. Ye nubuck imhando yeganda kubva kune iyo shangu inogadzirwa uye fanicha yakafukidzwa ...
uko mahwindo download Lightroom Russian version. ipai chibatano chinyorwa.
iko kurodha pasi mahara Lightroom Russian vhezheni. ndipe chinongedzo ndapota. cwer.ru Adobe Photoshop Lightroom 4.1 Inotakurika Russian vhezheni http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html Lightroom Direct chinongedzo chemahara kurodha pasi http://shareflare.net/download/29740.2884d448ca5eda324b7fb989fe9a/2kravv38. exe.html hongu, tora ipapo ...
Chii chakavhara chivharo?
Chii chinonzi shutter shutter? Iyi inzira yekutora bara kana zvikamu zvakasiyana zvemufananidzo zvikafumurwa panguva dzakasiyana, uye kwete panguva imwe chete. Muchidimbu. Isu takagadzira chishandiso chinobvisa zvachose izvi ...
Chii chinonzi CROP chinoputika kune yakakanganiswa, yakagadzirirwa kamera, nezvimwewo?
Chii chinonzi chirimwa chakapfurwa pane chirimwa, chirimwa kamera, nezvimwe. Photoshopper, mucherechedzo (zvinoreva mucherechedzo1-mucherechedzo4, kwete pyadwak) - kamera yemutori wenhau, yakagadzirirwa vese nyanzvi. Uye akabvarurwa))))) ...
nzira yekushandura mifananidzo kuJPEG mafomati
Ungashandure sei pikicha kuita JPEG KANA NDINE MUDZIDZISO WAKAGADZIRIRA UYE NDINOFANIRA KUSHANDURA ICHIITA JPEB FOMATI, KUMASHURE KUNYANYA SEI? Zvinoenderana nekuti iri fomati yakaita sei pamberi ...
Mubvunzo wakakomba. Pane chero munhu anoziva kuti chakakomberedzwa chinowanikwa chakasiyana sei nechinhu chekuisa? Kune mamwe maburi akafanana ...
Mubvunzo wakakomba. Pane chero munhu anoziva kuti chakakomberedzwa chinowanikwa chakasiyana sei nechinhu chekuisa? Kune mamwe maburi akafanana ... ini ndichawedzera angu mashanu kopecks. Chikamu chemhando yevhidhiyo chakanyanya kukwirira. Makomba - unozviziva wega ...
Nzira yekuwedzera sei ukuru hwemufananidzo mune zvirongwa zvepakombiyuta yako?
Nzira yekuwedzera sei saizi yemufananidzo muzvirongwa zvakajairwa pakombuta? vhura iyo pikicha, wedzera iyo nekufona, tinya purinda yekudhinda, vhura Paint, kubva kumusoro kuruboshwe pinda INSERT uye unomhanya zvisina basa Resize mufananidzo ne ...
Mupi gore ripi kuvepi kuonekwa mafirimu?
Kutora mifananidzo kwakaonekwa gore ripi? Kugadzira kwake kwakabereka nyowani yekushambadzira svikiro uye mafomu ekutanga ekushambadzira kwemazhinji, ayo aisanganisira mapepa ekutsikisa, mapepa uye kushambadzira kwepepanhau. MuLondon,…
Chii chiri ISO mukamera?
Chii chinonzi ISO mune kamera? Zvakafanana nekunzwisisika kweiyo firimu, inoratidzwa mumayuniti eiyo epasi rose standard (ISO) .Nekufananidza, iyo inowedzera kukwirisa, iyo yakakura zviyo mufirimu uye kuitika kwe "ruzha" ...
Vhenekerwa: zvinorevei kuti "kirasi 6 memory kadhi"?
Vhenekerwa: zvinorevei kuti "kirasi 6 memory kadhi"? YeDziviriro Dhijitari (SD) uye Yakachengeteka Dhijitari HC (SDHC) memori makadhi, yakakosha paramende inoshandiswa kuyedza mamhanyisa hunhu - yekumhanyisa kirasi (SD ...
HDR chii ichocho?
HDR chii icho? http://blyg.livejournal.com/22444.html HDR inzira nyowani uye ine fashoni mukutora mifananidzo munguva pfupi yapfuura, iyi nzira inokutendera kuti ugadzire mapikicha akanaka kwazvo kunyangwe kubva kumifananidzo yakajairika. HDR ...
chii chinonzi selfie Ndiko kutora mifananidzo yako kuburikidza nekamberi kamera, kuburikidza negirazi kana nekukanda lens kune iwe pachako. Muchinjikwa. Uyu musikana asina mhosva anga asingazive rudo! ) ...
ndiudze kuti zvakanaka sei fotkatsya ..
ndiudze nzira yekutora mifananidzo nenzira kwayo .. usanetse, chinhu chikuru! Izvo zvinodikanwa kuti usadaro maererano neGOST 32843-2004 pa "Mifananidzo mishoma yevasikana nevakadzi yevatema uye yemagariro." Mutsara kubva kuGOST: 2.6. Iyo modhi inofanirwa ...
Ini ndoda kuisa magirazi pamufananidzo wangu, ndiudze chirongwa ... kunze kweiyo Photoshop
Ndiri kuda kuisa magirazi pamufananidzo wangu, ndiudze chirongwa ... kunze kweiyo Photoshop.Tarisa mhinduro yangu pano: http://otvet.mail.ru/question/55959991/ Gimp, penda. kwete, zvirongwa "stylist", nezvimwewo zvinogoneka mu superGu. Handizivi ....
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,492 masekondi.